Ajjeechaa Obbo Gammachis Taaddasaa irratti poolisiin maal beeka - BBC News Afaan Oromoo
Ajjeechaa Obbo Gammachis Taaddasaa irratti poolisiin maal beeka
Madda suuraa, Fesbuukii
Hogganaan Itiyoo Telekoom Zoonii Lixaa kan magaalaa Naqamteetti argamu Obbo Gammachiis Taaddasaa dheengadda galgala (Dilbata) sa'aatii tokkoorratti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu Poolisiin beeksiseera.
Itti Gaafatamaan Qajeelcha Poolisii Magaalaa Naqamtee Komaandar Girmaa Abdiisaa BBC Afaan Oromootti akka himanitti namni yakka ajjeechaa kanaan shakkamee to'annaa jala oolfame hanga ammaatti hin jiru.
Yakka ajjeechaa raawwatame kana adda baafachuuf garuu hojjetamaa jira kan jedhan qondaalli poolisii kun, kan ajjeefame rasaasaan ta'uu ammoo himaniiru.
"Dhukaasni dhaga'ameera waan ta'eef rasaasaan ta'uu mala."
Yeroodhaaf rakkoon nageenyaa magaalaa keessatti uumameeruufi wanti shakkamu jiraa? gaaffii jedhuufis, hanga ammaatti akka magaalaa isaaniitti rakkoon nageenyaa hin jiru jedhan Komaandar Girmaan.
"Gareen dhimmi kun ilaallatu itti deemee qulqulleessaa jira. Ammaaf garuu rakkoon nageenyaa magaalaa keenya keessa hin jiru," jechuun dubbatan.
Obbo Gammachiis osoo lubbuun keessa jiruu galgala saatii tokkoon booda gara hospitaalaa akka geeffameefi osoo baay'ee hin turiin lubbuun isaa darbuu kan himan ammoo Medikaal Daarektarrii Hospitaala Riifaraala Naqamtee Dr. Daamxoo Gaarradoodha.
''Irree isaa karaa bitaarra bakka lama rukkutameera, akkasumas qolee isaarraan rukkutamee karaa bitaan rasaasni bahe iddoo tokko jira," jedhan.
Dr. Daamxoon kana malees miilla gara sarbaa isaarra rukkutaan bakka lama jiraachuu himuun, rukkutaan sun karaa lixeefi bahe waan qabuuf rasaasa fakkaata jedhan.
Akka Dr. Daamxoon jedhanitti, bakki miidhame afraffaan onnee isaarra yommuu ta'u waraansa fakkaata jechuun himan.
"Inni baay'ee bal'aadha. Miidhaan ajjeechaan irraa ga'ames isaanidha. Ani yeroo sana hospitaalan ture. Egaa namni kun baay'ee dhiiguudhaan akka du'edha kan tilmaamame. Sa'a sanatti afuurri xiqqootu keessa jira."
Namni kun akkuma hospitaala seeneen yeroo gabaabduu keessatti, daqiiqaa lamaa gaditti ture kan lubbuun darbe.
Hiriyyoonniifi Gammachiisiin warri jaallatan akka isa ibsanitti, nama tattaafataafi yaada tarkaanfataa qabudha.
Obbo Gammachiis Yunvarsiitii Wallaggaatti Manaajimantiidhaan doktoreetii barataa kan jiruufi waggaa sadaffaarra ga'uu Yunvarsiitichi ibseera.
Yunvarsiitiin kun lubbuun Gammachiis darbuu isaatti gadda isatti dhaga'ames ibseera.
Ajjeechaa Obbo Gammachiis booda namoonni isa beekan gadda isaanii ibsaa jiru. Namni Henook jedhamuufi Yunivarsiitii Jimmaatti waliin baranne jedhe tokko ergaa isaa asiin gadi barresseera.
Akka Henook jedhetti taanaan Gammachiis barataa qabxii olaanaa qabu ta'us ummata gargaaruuf jecha gara Naqamtee akka deeme hima.
Yaaliin ajjechaa Obbo Gammachis irratti yeroo taasifamu kuni kan duraa miti. Waggaa dura yeroo Mana Amantaatii manatti galu karaatti dhukaasni itti dhukaafamu gabaafameera.
Yaalii sanaaf gareen dhoksaan socho'uufi namoota ajjeesuu irratti xiyyeeffate himatameera.
Inni tibbanaa isaan wal haa qabatu ammatti wanti ifatti beekamu hin jiru.
Yeroo waggaa dura yaaliin irratti taasifame waan dhalate gaafachuu kan himu Heenok, ''ummanni kan barbaadu nagaadha. Ta'us seeraa alummaatu jira,'' naan jedhe jechuun Henook barreesseera.
Ajjeechaa booda guyyaa kaleessaa poolisiin namoonni to'ataman hin jiran jedhanis namni ollaa Obbo Gammachiis irraa dubbisne tokko garuu namoonni lama to'atamuu himaniiru.
Wallagga Bahaatti dhukaasa banameen poolisiin federaalaa tokko ajjeefame
Magaala Naqamtee keessatti hojjetaan mootummaa tokko rasaasaan dhahame